मत्ती १८ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
१८ त्यसबेला चेलाहरू येशूको नजिक आए र उहाँलाई सोधे: “स्वर्गको राज्यमा सबैभन्दा ठूलो को हुनेछ?” २ तब येशूले एउटा सानो बालकलाई बोलाएर तिनीहरूको बीचमा उभ्याउनुभयो ३ र भन्नुभयो: “म तिमीहरूलाई साँचो-साँचो भन्छु, यदि तिमीहरू बदलिएर साना केटाकेटीजस्ता भएनौ भने स्वर्गको राज्यमा कुनै पनि हालतमा पस्न पाउनेछैनौ। ४ त्यसकारण जसले आफूलाई यो सानो बालकजस्तै नम्र तुल्याउँछ, ऊ नै स्वर्गको राज्यमा सबैभन्दा ठूलो हुनेछ, ५ अनि जसले मेरो नाममा यस्तै एउटा सानो बालकलाई स्वीकार्छ, उसले मलाई पनि स्वीकार्छ। ६ तर यदि कसैले ममाथि विश्वास गर्ने यी सानाहरूमध्ये एक जनालाई ठेस पुऱ्याउँछ भने त्यस्तालाई त ठूलो जाँतो* घाँटीमा झुन्ड्याएर गहिरो समुद्रमा डुबाइदिनु बेस हो। ७ “धिक्कार छ यस संसारलाई, किनकि यसले मानिसहरूलाई बाधा* पुऱ्याउँछ! हो, बाधा त अवश्य आउनेछ तर त्यस मानिसलाई धिक्कार छ, जो त्यस्तो बाधाको कारण बन्छ! ८ यदि तिम्रो हात वा खुट्टाले तिमीलाई पाप गर्न लगाउँछ* भने त्यसलाई काटेर फालिदेऊ। किनकि सधैं बलिरहने आगोमा * दुवै हात वा दुवै खुट्टासहित फ्याँकिनुभन्दा लुला-लङ्गडा भएर जीवन* पाउनु नै तिम्रो लागि असल हो। ९ साथै, यदि तिम्रो आँखाले तिमीलाई पाप गर्न लगाउँछ भने त्यसलाई निकालेर फालिदेऊ। किनकि दुवै आँखासहित गेहेन्नाको* आगोमा फ्याँकिनुभन्दा कानो भएर जीवन पाउनु नै तिम्रो लागि असल हो। १० होसियार बस, तिमीहरूले यी सानाहरूमध्ये कसैलाई हेला नगर, किनकि म तिमीहरूलाई भन्छु तिनीहरूको रखवाली गर्ने स्वर्गदूतहरूले स्वर्गमा बस्नुहुने मेरो बुबाको मुहार सधैं हेरिरहेका हुन्छन्‌। ११ * — १२ “तिमीहरूलाई कस्तो लाग्छ? यदि कुनै मानिसको सय वटा भेडा छन्‌ र तीमध्ये एउटाले बाटो बिरायो भने उनान्सयलाई डाँडामै छोडेर के ऊ बाटो बिराउने त्यो एउटा भेडो खोज्न जाँदैन र? १३ अनि उसले त्यसलाई केही गरी भेट्टाइहाल्यो भने म तिमीहरूलाई साँच्चै भन्छु, बाटो नबिराएका उनान्सयका लागि भन्दा त्यो एउटाका लागि ऊ धेरै रमाउनेछ। १४ त्यसैगरि, स्वर्गमा बस्नुहुने मेरो बुबा यी सानाहरूमध्ये कसैले पनि बाटो बिराएको चाहनुहुन्न। १५ “यदि तिम्रो भाइले पाप गऱ्यो भने जाऊ र तिमी र ऊ मात्रै हुँदा उसको दोष देखाइदेऊ। यदि उसले तिम्रो कुरा सुन्यो भने तिमीले तिम्रो भाइलाई ठीक बाटोमा फर्काउन सक्यौ। १६ तर उसले सुनेन भने आफूसित अरू एक वा दुई जना लिएर जाऊ, ताकि दुई वा तीन जना साक्षीको मुखबाट एक-एक कुरा पक्का होस्। १७ यदि उसले तिनीहरूको कुरा सुनेन भने मण्डलीलाई* भन। अनि यदि उसले मण्डलीको कुरासमेत सुनेन भने ऊ तिम्रो लागि अन्यजाति वा कर उठाउने मानिससरह होस्। १८ “म तिमीहरूलाई साँचो-साँचो भन्छु, तिमीहरूले जे-जे पृथ्वीमा बाँध्नेछौ* ती स्वर्गमा बाँधिसकेका हुनेछन्‌ अनि तिमीहरूले जे-जे पृथ्वीमा फुकाउनेछौ * ती स्वर्गमा फुकाइसकेका हुनेछन्‌। १९ यो पनि म तिमीहरूलाई साँचो-साँचो भन्छु, यदि पृथ्वीमा तिमीहरूमध्ये दुई जना सहमत भएर कुनै महत्त्वपूर्ण कुरा माग्यौ भने स्वर्गमा बस्नुहुने मेरो बुबाले त्यो पूरा गरिदिनुहुनेछ। २० किनकि जहाँ मेरो नाममा दुई वा तीन जना भेला हुन्छन्‌, त्यहाँ म तिनीहरूको माझमा हुन्छु।” २१ तब उहाँकहाँ आएर पत्रुसले सोधे: “हे प्रभु, मेरो भाइले मेरो विरुद्धमा पाप गरिरह्यो भने मैले कति पटकसम्म क्षमा दिनुपर्छ? सात पटकसम्म?” २२ येशूले तिनलाई जवाफ दिनुभयो: “म भन्छु, सात पटक होइन, सतहत्तर* पटकसम्म। २३ “त्यसैले स्वर्गको राज्य एक जना राजा जस्तै हो, जसले आफ्ना दासहरूलाई आफूसित लिएको ऋण चुक्ता गर्न बोलायो। २४ अनि ऋण उठाउँदै जाँदा, छ करोड दिनार* ऋण लिने दासलाई तिनीसामु हाजिर गराइयो। २५ तर ऊसित ऋण चुक्ता गर्ने कुनै उपाय नभएकोले राजाले त्यो दास, उसकी पत्नी, छोराछोरी अनि सम्पूर्ण जायजेथा बेचेर ऋण असुल्ने हुकुम गरे। २६ तब त्यो दास घोप्टो परेर बिन्तीभाउ गर्न लाग्यो, ‘हजुर, मलाई समय दिनुहोस्, म तपाईंको जम्मै ऋण चुक्ता गरिदिनेछु।’ २७ यो सुनेर राजाको मनमा दया जाग्यो र तिनले उसलाई जान दिए अनि उसको जम्मै ऋण पनि माफ गरिदिए। २८ तर त्यो दास आफूसित एक सय दिनार सापटी लिने सँगी दासलाई खोज्न निस्क्यो र त्यसलाई समातेर घोक्रो अँठ्याउँदै भन्यो: ‘मेरो पैसा फिर्ता गरिहाल्।’ २९ तब त्यो सँगी दास घोप्टो परेर बिन्ती गर्न लाग्यो: ‘मलाई समय देऊ, म तिम्रो पैसा फिर्ता गरिदिनेछु।’ ३० तर उसले आफ्नो साथीको कुरा सुन्न मानेन र पैसा फिर्ता नगरुन्जेल त्यसलाई झ्यालखानामा थुन्न लगायो। ३१ जब अरू सँगी दासहरूले यो सब देखे तब तिनीहरू असाध्यै दुःखी भए र जे-जे भयो, गएर राजालाई बेलीबिस्तार सुनाए। ३२ अनि राजाले त्यस दासलाई हाजिर गराएर यसो भने: ‘ए दुष्ट दास, तैंले मसित बिन्ती गर्दा मैले तेरो सबै ऋण माफ गरिदिएँ। ३३ तब मैले तँमाथि कृपा गरेजस्तै के तैंले पनि आफ्नो सँगी दासमाथि कृपा गर्नु पर्दैनथ्यो?’ ३४ अनि राजा क्रुद्ध भए र आफ्नो सबै ऋण नतिरेसम्म त्यस दासलाई थुनिराख्न जेलरहरूको हातमा सुम्पिदिए। ३५ त्यसैगरि तिमीहरू हरेकले आफ्नो भाइलाई मनैदेखि क्षमा गरेनौ भने स्वर्गमा बस्नुहुने मेरो बुबाले पनि तिमीहरूलाई त्यसै गर्नुहुनेछ।”
^ मत्ती १८:६ * वा, “गधाले घुमाउने जाँतो।”
^ मत्ती १८:७ * वा, “विश्वासलाई हानि पुऱ्याउने अवरोध।”
^ मत्ती १८:८ * शाब्दिक, “ठेस पुऱ्याउँछ।”
^ मत्ती १८:८ * अर्थात्‌, “सधैंका लागि नाश हुनु।”
^ मत्ती १८:८ * अर्थात्‌, “अनन्त जीवन।”
^ मत्ती १८:९ * यरूशलेमबाहिर फोहरमैला जलाउने ठाउँ। अतिरिक्त लेख ९ हेर्नुहोस्।
^ मत्ती १८:११ * कुनै-कुनै पुराना ग्रीक पाण्डुलिपिहरूमा पद एघार पाइँदैन; तर बाइबलका केही पाण्डुलिपिहरूमा भने यो पद पाइन्छ र त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ: “तर मानिसको छोरा हराएकोलाई बचाउन आएको हो।”
^ मत्ती १८:१७ * यहाँ मण्डलीका प्रतिनिधिहरूसित कुरा गर्नेबारे चर्चा गरिएको हुनुपर्छ।
^ मत्ती १८:१८ * सम्भवतः यसले कुनै व्यक्तिलाई गलत कामको दोषी ठहराउने निर्णय वा तिनलाई कुनै खास काम गर्न नदिने निर्णयलाई बुझाउँछ।
^ मत्ती १८:१८ * सम्भवतः यसले कुनै व्यक्तिलाई गलत कामको दोषबाट मुक्त गर्ने निर्णय वा तिनलाई कुनै खास काम गर्न दिने निर्णयलाई बुझाउँछ।
^ मत्ती १८:२२ * शाब्दिक, “सात गुणा सत्तरी।”
^ मत्ती १८:२४ * शाब्दिक, “दस हजार तोडा।” ग्रीकमा टालेन्टोन। टालेन्टोन, तौल वा मुद्राको इकाइ नाप्ने सबैभन्दा ठूलो हिब्रू नाप थियो। इ. स. प्रथम शताब्दीमा एक ग्रीक टालेन्टोन बराबर २०.४ किलो सुन वा चाँदी हुन्थ्यो।